धादिङको धार्केमा अज्ञात समहुद्धारा दुईवटा कन्टेनरमा आगजनी ! – मुलधार न्युज
Home > समाचार > धादिङको धार्केमा अज्ञात समहुद्धारा दुईवटा कन्टेनरमा आगजनी !
३० बैशाख २०७५, आईतवार १४:३७
पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत धादिङको धुनिबेशी नगरपालिका वडा नम्बर ६ चालिसेमा रोकिराखेको दुईवटा कन्टेनर ट्रक मारातीको समय पारेर आगजनी गरिएको छ । सडक नजिकै रोकिराखेको आर जे ४२ ग ५०२१ र आर जे ४२ ग ०७५६ नम्बरको २२ चक्के भारतिय नम्बर प्लेटको दुईवटा कन्टेनर ट्रकमा आज विहान अज्ञात समुहले अगजनी गरेको हो ।
बिहान करिब ३ बजेदेखी आगो लागेपछि चार वटा डोजरको सहयोगमा आगलागी भएको ट्रक वरिपरी माटो हालेर आगो दायाँ बाँया आगो नियन्त्रणको प्रयास गरिएको स्थानीयले वताए । आगलागि भएको २ घण्टा पछि ५ बजे काठमाण्डौँ महानगरको दमकल घटनास्थल आईपुगेको थियो । दमकल आएपछि आगो नियन्त्रणमा लिईएको छ । आगलागि बाट मानविय क्षति भएको छैन । घटना स्थल नजिकै वाक्लो बस्ती , पेट्रोल पम्प र ग्यास उद्योग नजिकै रोकिराखेको ट्रकमा आगलागि भएपछि भएका कारण सर्वसाधरण आतंकित भएका थिए ।
आगलागी पछि विद्युतको तार जल्दा विद्युत सेवा अवरुद्द भएको छ । आगो कसरी लाग्यो भन्ने बारेमा पुष्टि हुन सकेको छैन । घटना पछि अहिले उक्त सडक क्षेत्रमा सवारी साधनको चाप रहेको छ । प्रहरीले घटनाबारे छानविन गरिरहेको ईलाका प्रहरी कार्यालय खानीखोलाका प्रमुख जिवन निरौलाले बताए । घटनामा विप्लव समूहको संलग्नता हुन सक्ने आशंका गरिएपनि यस्को पुष्टि भने हुन नसकेको उनले बताएका छन । अहिले पृथ्वीराजमार्ग र त्रिभुवन राजपथमा सवारी साधन सञ्चालन भईरहेका छन ।
‘ए’ डिभिजन लिग:एपिएफले मच्छिन्द्रलाई हरायो
निर्मला हत्या प्रकरणः धर्नास्थलमा नेता आउने क्रम जारी, प्रहरी भन्छ, ‘अनुसन्धान जारी छ’
चलचित्र ‘हुर्रे’को गीत रिलिज, आइटम डान्स बिना फिल्म नै नभन्ने सोच चलचित्रकर्मीको
धितोपत्र बजार सुधारको माग राख्दै स्टकमा धर्ना